Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » ukonwatyiswa » Ukwabelana ngesondo simahla kunye noKhenketho lweSixeko
Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Culinary • inkcubeko • ukonwatyiswa • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • Iindaba zeLuxury • iindaba • Imitshato yothando • Shopping • Tourism • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Yima. Ngaba loo nto yayifanele ukuba ifundwe ngesondo sasimahla KWI-Tours yeSixeko? Ngaba ayizukuchaneka ngokwegrama? Ewe injalo, kodwa iya kuba yinto ephosakeleyo ngokucacileyo kukhenketho esiza kulukhangela. Sifuna ukutyelela iSondo kunye neendawo zeSixeko.
Ngubani ongayikhumbuliyo indlu kaCarrie kunye nekhabhathi yayo enomdla?
Okanye ivenkile yezihlangu zikaManolo Blahniks ezibambe amehlo akhe ngaphezu kwesinye njengoko wayehamba ethetha. Uyawukhumbula loo mgca udumileyo, "Molo, sithandwa" xa wayengathethi ngendoda?
Kwaye ke kukho iSithili seMatpacking apho uSamantha angena kwi-tiff ene-3 transvestites.
Ukufa kwabalandeli abanzima bomdlalo weTV "Ukwabelana ngesondo kunye neSixeko," zininzi iinkumbulo ngeenxa zonke kwisiXeko saseNew York apho ibali lenzeka khona ngabalinganiswa abaphambili uCarrie, uSamantha, uMiranda noCharlotte. Ukusuka kwindawo abayithandayo yokudibana nokutya kunye nobudlelane, indlela ethandwa kakhulu nguCharlotte ebaleka kwiJacqueline Kennedy Onassis Reservoir, ukuya kwindawo ka-Steve awayithiya ngegama lenja yakhe, kwiindawo ezininzi abadibene neziselo, i-NYC Zesini kunye nesiXeko hotbed, akukho pun ejoliswe.
Ngokuqinisekileyo, ungahlawula isondo kunye nokhenketho lweSixeko- ngebhasi umzekelo, kodwa kutheni ungahloli ngexesha lakho kunye neyona nto uyithandayo ukhenketho olukhokelwa simahla?
Nazi ezinye zeendawo ezidumileyo ezibonwe kumdlalo weTV onokuthi ufune ukuyeka ukuluma, ukusela, okanye ukujonga.
Manolo blahnik nge-31 W 54th Street
UCarrie udlula kwivenkile yezihlangu zikaManolo Blahnik ngaphezulu kwesihlandlo esinye kulo lonke uthotho lweTV. Esinye isiganeko ngokukodwa kuxa eqonda ukuba uchithe i-40,000 yeedola kwizihlangu yedwa-imali ebeyifuna ngoku ukuthenga indlu yakhe.
Uyakhumbula xa uCarrie noMnu Big bawela emanzini kule restyu yaseCentral Park? Babesele beqhawukile kodwa bagqiba kwelokuba badibane ngesidlo sasemini ukuze babambe. Emva kokuba uMiranda wayemlumkisile ukuba kungcono angamanga, xa uMnu Big ethembele koko, uCarrie wabuyela emva kokufika emanzini wamzisa kunye naye.
Indawo yokutyela yaseDa Marino kwi220 W 49th Street
Ukuthetha ngoCarrie noBig kunye neeresityu, kuthekani ngeDa Marino xa bebuyelana kwakhona kwaye ngelixa besitya isidlo sangokuhlwa kwindawo yokutyela yaseTaliyane eyothusayo, apho uCarrie efunda ukuba uhlala ethe gqolo njengoko umnini esiza kubabulisa. Emva koko uyekiswa nguBig xa ecula "Xa ndandineminyaka elishumi elinesixhenxe," kwaye uCarrie waphantse wayikhupha iwayini yakhe.
IiComics zikaSt kwisitrato se-11
Kulungile masikhe sihlukane noCarrie noBig okomzuzwana kwaye sibuyele kwivenkile yaseSt. Kulapho wadibana khona noWade- umfana ongenalo inkathalo emhlabeni (osahlala nabazali bakhe) okumothusa kakhulu uCarrie emva kokuba umama wakhe engenile xa bobabini bebephezulu kwentsangu kwaye usola ukhula kuCarrie. Uyahamba nayo kwaye uthabathe ukhula kunye nokukhokelela kwenye indawo ehlekisayo kwindlu kaCarrie xa eyabelana ngayo noSamantha, uCharlotte, noMiranda, kwaye emva kokuba ebanjiwe ngenxa yokutshaya esidlangalaleni, uCarrie wabhengeza usuku njengolo xa wabanjwa ngenxa yokutshaya idoobie.
IMagnolia Bakery kwisitrato iBleecker 401
Isenokungabi yinto ekhunjulwayo kaCarrie noMiranda ekwabelaneni ngamaqebengwana njengoko besonwabela ubudlelwane, kodwa le ndawo yokubhaka yaba ludumo kwihlabathi lonke ngenxa yokutya ekwabelwana ngako. Kwaye ndithetha ukuba ngubani ongadingi sizathu sokuma kwindawo yokubhaka ukuze anyange?
Isifuba soThando kwi-156th nakwi-7 Avenue S.
Isikhokelela kunyango olwabamba uCharlotte kangangokuba ungenelelo kwafuneka lubekwe kwisiqendu xa iRibbit vibrator yakhe, awayeyithengile kule venkile incinci inomdla, yathathwa ukuze abuyele kubomi bemihla ngemihla afumane. izizathu zokushiya indlu yakhe kwakhona.
Igadi yentengiso yaseJefferson phakathi kwe-6th Avenue kunye ne-W 10th Street
Ukuhamba usiya kwizinto ezintle ngakumbi, kuthekani ngale gadi intle yoluntu apho uMiranda noSteve bagqiba ekubeni batshate? Wayezimisele ukufumana indawo "eyayingeyo-icky," kwaye wenza njalo xa ibhegi yakhe yokutya yaphuka kanye phambi kwamasango egadi. Umqondiso oqinisekileyo wokuba singatsho ukuba le yindawo.
UKim Cattrall, uCynthia Nixon, uKristin Davis kunye noSarah Jessica Parker (Ifoto nguBill Davila / FilmMagic)
I-Plaza Hotel kwi-5 Avenue kunye ne-59th Street
Ngokwenyani, naluphi na uhambo oluya e-NYC kufuneka lubandakanye ubuncinci bokuhamba-ngaphakathi kwigumbi lokuhlala e-Plaza Hotel, akunjalo? Ewe, bekukho umbono apha, naye, xa uCarrie wathetha noBig emva kwetheko lakhe lokuzibandakanya kuNatasha - awambiza ngokuba ngumthi wentonga engenamphefumlo. Kule ndawo ubuye wenza imiboniso bhanyabhanya ethi "Indlela Esasiyiyo," xa wayebrasha iinwele zikaBig ngeminwe yakhe athi, "Intombazana yakho iyathandeka, Hubble."
Kwaye zininzi ezinye iindawo zokuhlola - iRussia Samovar ekwi-256 W 52nd Avenue apho uCarrie eya kumhla wakhe wokuqala kunye ne "Russian," edlalwa nguMikhail Barishnykov, kunye neColumbus Circle Fountain e-59th Street nakwisi-8 Avenue apho uCarrie aqhekeza khona Intliziyo ka-Aidan okwesibini kwaye ilungile.
Ke kukho iSebe laseNew York leThala leeNcwadi likaRhulumente eliPhambili kwi-5th Avenue kunye ne-42nd Street apho uCarrie noBig kufanele ukuba batshate (amagama aphambili ekufanele ukuba batshatile). Kwaye isakhiwo apho uCarrie noBig bafumana iphupha labo lendlu ye-NYC apho befanele ukuba khona (kukho loo magama kwakhona) bahlala emva komtshato kwi-1010 Fifth Avenue. Hayi, linda. Enye yeemovie emva komboniso weTV. Kodwa lolunye uluhlu lwamabhakethi eendawo zokundwendwela.